Ahoana ny fomba hanaingoanao manokana ireo mailaka fanentanana anao hahazoana valiny tsara kokoa | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanaingoanao manokana ny mailaka ataonao mba hahazoana valiny tsara kokoa
Alahady, Septambra 30, 2018 Alahady, Septambra 30, 2018 Antonija Božičković
Ny mpivarotra rehetra dia mahalala fa ny mpanjifa ankehitriny dia maniry hanana traikefa manokana; fa tsy afa-po intsony izy ireo amin'ny maha isa hafa azy ireo amin'ireo firaketana faktiora an'arivony. Raha ny marina, ny orinasan'ny fikarohana McKinsey dia nanombana fa ny famoronana a traikefa manokana momba ny fiantsenana afaka mampisondrotra fidiram-bola hatramin'ny 30%. Na dia izany aza, na dia mety miezaka ny manamboatra ny serasera amin'ny mpanjifany aza ny mpivarotra dia maro no tsy mahavita manaraka izany fomba izany amin'ny fahazoana mivoaka amin'ny mailaka.
Raha mitady ho azy manokana ny mpanjifa, dia azo heverina fa ny influencer, bilaogera ary tompona tranokala dia hitady traikefa mitovy amin'izany. Ny personalization dia toa vahaolana tsotra hanatsarana ny tahan'ny valiny, sa tsy izany? Azo antoka. Saingy ny personalization amin'ny fanelezana mailaka dia samy hafa be amin'ny personalization amin'ny marketing amin'ny mpanjifa, ary izany no mahatonga ny mpivarotra sasany tsy mahita fahombiazana mazava.
Ao amin'ny marketing an'ny mpanjifa, ny mpivarotra dia toa nanasaraka ny fifandraisany ary namorona safidy mailaka kely hanintona ny mpandray rehetra ao anatin'io vondrona io. Na izany aza, amin'ny fampielezana fanentanana dia tsy ampy ny fizarana vondrona. Ny pitches dia mila ampanjifaina amin'ny sehatra tsirairay kokoa hanana ny tadiavina sy ny vokany tsara indrindra ary izany, mazava ho azy, dia midika fa ilaina ny fikarohana avo lenta.
Ny maha-zava-dehibe ny fikarohana amin'ny asa fitoriana
Mety ho fanamby tokoa izy io - raha tsy tsy azo atao - ny mahomby amin'ny famolavolana tsara ny pitch nefa tsy nanao fikarohana lalina lalindalina. Ilaina ny fikarohana, indrindra amin'ny fotoana iray izay resahan'ny Lehiben'ny Spam amin'ny tranonkala teo aloha Matt Cutts an'i Google momba ny famahanam-bolongana ho lasa 'mihabe hatrany fampiharana spammy'. Mitady bebe kokoa ireo bilaogera; ho an'ny olona izay tena nanao ezaka mba handrenesana ny heviny.
Na izany aza, ny 'fikarohana', amin'ity tranga ity, dia tsy hoe fahalalana ny anaran'olona fotsiny ary afaka mahatadidy ny lohatenin'ny bilaogy vao tsy ela akory izay; io dia ny fitsirihana ny fahazarana an-tserasera an'ny mpandray anao, ny safidiny, ary ny tsirony amin'ny fikasana hiditra… nefa toa tsy dia be loatra amin'ny Internet stalker, mazava ho azy!
Fomba 4 hanafahana manokana ny mailakao amin'ny fikarohana
Raha mikasika ny fanentanana sy fanaovana fahatsapana voalohany matanjaka sy sarobidy dia ilaina ny tsy hidiran'ny mpivarotra amin'ny fandrika fanaovana mahazatra lesoka momba ny marketing mailaka. Mety ho sarotra ny manitsy ny sombin-tany manokana, fa ireto torohevitra 4 ireto hanamboarana mailaka fanentanana dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fahombiazana:
Ataovy manokana ny tsipika momba ny lohahevitrao - Ny toerana voalohany hanombohana dia ny laharan'ny lohahevitra mailakao. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny tsipika manokana namboarina dia afaka mampitombo ny tahan'ny misokatra amin'ny 50%, fa inona no fomba tsara indrindra hanampiana fikolokoloana ny lohateninao? Amin'ity tranga ity dia momba ny personalization mampihetsi-po fotsiny izy io fa tsy ny personalization mivantana. Ny manisy ny anaran'ny mpandray anao fotsiny amin'ny andalana foto-kevitrao dia tsy hanapaka azy. Raha ny marina dia mety ho fomba fanao manimba tokoa izany satria lasa tetika mahazatra iraisan'ny orinasa mandefa mailaka fivarotana tsy nangataka. Fa kosa, miezaha hifantoka amin'ny lafiny mampihetsi-po ny zavatra; fikendrena zanabola. Miankina hevitra momba ny atiny hifankahitana amin'ny toeran'ny mpandray, ary tadidio: ny teny roa voalohany isaky ny lohahevitra no zava-dehibe indrindra! Loharano sary: Neil Patel
Fantaro ny mety ho fahafaha-manao manokana - Ny tsipika lohahevitra dia tsy ny toerana tokana ahafahana manisy tendrena fanokanan-tena amin'ny sehatra iray. Diniho raha misy fotoana hafa ahafahana manamboatra ny haavonao mba hifandray tsara kokoa amin'ilay mahazo azy. Izao no fotoana tokony hirosoana amin'ny fikarohana. Ohatra, tena tsy misy ny safidin'ny rehetra amin'ny karazana atiny. Na dia aleon'ny sasany mahita lahatsoratra aza, ny sasany kosa tia infografika sy sary an-tsary hafa, ny sasany kosa tia sary sy horonan-tsary, ny sasany kosa tia endrika endrika famoahana gazety kokoa. Inona no tian'ny mpandray? Mazava ho azy, izay rohy rehetra tafiditra ao anaty ny sangan'asa ho anao manokana dia tokony hifandraisany amin'ny tombotsoan'ny mpandray azy ary andramo ny mampiditra ny sasany amin'ny tenin'izy ireo sy ny feony ao anaty atiny. Loharano sary: Prolific Criminally
Mandehana Ambony sy Mihoatra - Indraindray, ny torohevitra 1 sy 2 fotsiny dia tsy ampy hanomezana fahafaham-po ireo fahatsinjovan-tena amin'ny traikefa manokana. Mety ilaina ny mandeha any ambony sy any ivelany mba tena hisongadina. Azonao atao ny manondro ireo lahatsoratra mifandraika amin'ny bilaogy izay noresahin'ilay mpandray mivantana taloha, na koa ny firesahana ireo lahatsoratry ny bilaogin'izy ireo manokana mba hampifandraisina ny hevitr'izy ireo amin'ny hevitrao. Angamba aza manolotra tolo-kevitra ho an'ny loharano hafa mety hahaliana azy ireo noho ny fihetsika sy ny hetsika an-tserasera. Raha mampiasa sary maro ny mpandray mba hahitana ny heviny, alao sary an-tsaina ity eo amin'ny sehatra. Ny fampiasana pikantsary mifandraika amin'izany, ohatra, dia mety hanery ny olona handray tsara.
Ampiasao ny ankamaroan'ny fitaovana misy - Tsy azo lavina fa ny personalization ho an'ny tsirairay mpandray - mifanohitra amin'ny personalization ho an'ny lisitry ny mpanjifa mizarazara - dia mitaky ezaka be fa tsy manam-potoana firy ny mpivarotra maro. Tsy midika izany fa tsy azo anaingoana manokana ny doka mailaka. Raha ny tena izy, ny mailaka dia azo atao manokana amin'ny alàlan'ny fitaovana marketing izay mandeha ho azy ny lafiny maro amin'ny fizotrany. Ireo fitaovana ireo dia afaka manampy amin'ny famaritana ny tombotsoan'ny bilaogera amin'ny alàlan'ny famakafakana atiny, ary koa ny fanarahana ny fifandraisana anatiny sy ivelany mba hahafahan'ny mpivarotra mijery haingana sy mora ny resaka teo aloha. Amin'ny toe-javatra sasany, ilaina ny fampiasana ireo fitaovana misy ireo mba hiantohana ny fanentanana hatrany ny fampielezan-kevitra.
Mahita ny mahay mandanjalanja
Ny fambara farany manampy etsy ambony, na dia mahasoa aza, dia manokatra kankana lehibe. Ny personalization dia zavatra tokana sy tokana, ary ny fananganana fifandraisana matanjaka amin'ny samy olombelona matetika dia tsy azo tanterahina amin'ny alàlan'ny automatisation irery. Ny fitadiavana ny fifandanjana marina eo anelanelan'ny fidiran'ny tanana sy ny mandeha ho azy fanampiny dia lakilen'ny famoronana paika manokana izay mitaona fanahy, miditra ary miova.
Tags: mailakaVotoatin'ny mailakafanentanana mailakapersonalization mailakamailaka pitchfanentananamailaka prpr fanentananapr pitchfanentanana ny fifandraisana amin'ny daholobefifandraisan'ny besinimaro
Antonija dia manam-pahaizana momba ny marketing amin'ny Internet ao amin'ny Point Visible, masoivohom-barotra manome serivisy fananganana rohy sy marketing nomerika. Tena liana amin'ny marketing nomerika izy ary toerana malefaka amin'ny famolavolana sary. Tsy sasatra nitady aingam-panahy vaovao izy, nihaino mozika ankafiziny ary namorona sary nomerika.
Inona avy ireo fahaiza-manao maoderina manan-danja indrindra amin'ny taona 2018?